May 2011 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 5/31/2011 12:24:00 PM
မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ ဒကာတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး လျှောက်ထားလာပါတယ်။ သူက “ဘုန်းဘုန်းဘုရား တပည့်တော်မေးလျှောက်စရာ နည်းနည်းရှိလို့ပါဘုရား၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်က တပည့်တော်ရဲ့ အမေဆုံးသွားပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အသုဘ ချနေလောက်ပါပြီ၊ အမေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း သိရတော့ တပည့်တော်မှာ အတွေးပေါင်းစုံ ဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ အဝေးကြီးကိုရောက်နေတဲ့ တပည့်တော်မှာ မိဘတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေဖို့ ပစ္စည်းဝတ္ထုရှာဖွေ ပေးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြုစုခွင့် မရခဲ့ဘူး ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်၊ အဝေးရောက်နေတဲ့ တပည့်တော်တို့ရဲ့ ဘဝဟာ တော်တော်ကို ဝဋ်ကျွေးကြီးပါလားလို့လည်း မကြာမကြာ စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ တပည့်တော်တို့ရဲ့ ဘဝဟာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေက တခြားစီကို ဖြစ်နေရပါတယ်၊ အဲဒါဘယ်လို အကုသိုလ်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေကြရပြီး နောင်ဆိုရင် အဲဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတာ တပည့်တော်ကို မိန့်ကြားပေးပါဘုရား”လို့ မေးလျှောက်လာပါတယ်။ သူ့အမေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောပြရင်း အကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေးတွေရဲ့ သဘောနဲ့ ဒီလိုအကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေးဆိုတာ ဆုတောင်းဖို့ထက် မလုပ်ဘဲ ရှောင်ဖို့က အဓိကကျတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် ရှင်းပြပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာ တခြားစီပဲ ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တစ်ထပ်တည်းမကျဘဲ ဘဝနောက်ကို ဆန္ဒမရောက်တာတွေလည်း အများကြီး ရှိနေကြမှာပါ။ တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ကြရတဲ့ သဘောတွေ ရှိနေကြတဲ့အတွက် တစ်ချို့က ဒီလိုအဖြစ်တွေကို မလိုချင်ကြတော့တဲ့ သဘောတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း ကြီးလိုက်တဲ့ဝဋ်ကျွေးရယ်လို့ ဖြေဆည်ရာမရ ဖြစ်ကြရပြီး ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေက အမြန်ဆုံး လွတ်ကြဖို့ တောင်းဆုလေးတွေ ချွေလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ခက်တာက ပါးစပ်ကတောင်းနေကြပေမယ့် လုပ်တဲ့အလုပ်တွေက မကောင်းကြဘဲ ဖြစ်နေကြတော့ တောင်းတိုင်းလည်းမရ၊ လုပ်တိုင်းလည်း မလှဘဲ ဖြစ်နေရတဲ့ သဘောရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေးဆိုတာ ဆုတောင်းနေရုံနဲ့ ကျေပျောက်တဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ ဆုတောင်းနေရုံနဲ့ နောင်မအကျိုးမပေးတော့တဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဝဋ်ကျွေးတွေ နောင်ရောက်မလာအောင် အကုသိုလ်ကို မလုပ်ဘဲနေမှ ရတဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ၊ မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ဆုတောင်းနေရုံနဲ့တော့ ဒီအကျိုးတွေက ကျေပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုဟာ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်မိရင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုတွေ မဖြစ်ဖို့ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်မိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီးမှ ကန်တော့ပါဆိုသလိုမျိုး မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ပြီးမှ ကျေပါစေဆိုတာမျိုးကတော့ နောင်မှတတဲ့နောင်တပဲ ဖြစ်နေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကုသိုလ်ရဲ့ တန်ပြန်သဘောဟာ မရောက်လာအောင် ဆုတောင်းနေတာထက် မလုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကံကံရဲ့ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်မှု၊ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု သဘောအရ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာ တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုက ရှိနေကြမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကောင်းမှာ စေတနာကောင်းထားပြီး လုပ်ရင် ကောင်းကျိုးကို ရစေမှာဖြစ်သလို အလုပ်ဆိုးမှာ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ရင်လည်း မကောင်းကျိုးက ရောက်လာမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာ အကျိုးမပေးရသေးခင် ပျောက်ပျက်သွားတတ်တဲ့ သဘောမရှိသေးဘဲ အခါအခွင့် သင်တဲ့အခါ၊ အကျိုးပေးချိန် ကျတဲ့အခါမှာ သက်ရောက်မှုက ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိလေသာကုန်သွားလို့ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကံအကျိုးပေးတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်တော့ပေမယ့် သာမန်ပုထုဇဉ်တွေ အတွက်တော့ အခါအခွင့်သင့်ရင် ရောက်လာနေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်းစစ်တော့ ဒီကံတွေရောက်လာတာဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါ ကောင်းကံအကျိုးပေး ရောက်လာမှုမှာ အထူးပြောစရ မရှိပေမယ့် မကောင်းကံတွေ သက်ရောက်မှုရှိလာတဲ့ အခါမှာတော့ သတ္တဝါ အတော်များများက ကြောက်ရွံ့လာတတ်ကြပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အကျိုးပေးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါကျမှ ဒုက္ခတရားနဲ့ သေခြင်းတရားအပေါ်မှာ တုန်လှုပ်လာတတ်တဲ့ သဘောရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဘဲ ဟိုပြေးဒီပြေးကာ နီးစပ်ရာတွေမှာ တောင်းဆုလေးတွေ ချွေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေ အမြန်ပျောက်စေဖို့၊ နောင်မရောက်စေဖို့ စသဖြင့် ဝဋ်ကျွေးပြေဘုရားဆိုလား၊ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဆိုလား စတဲ့ စေတီလေးတွေမှာ သွားပြီးတော့ တောင်းချင်ရာတောင်းနေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့ပြီးမှ တောင်းနေကြတာထက်စာရင် မလုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကံနဲ့ မကောင်းကံရဲ့ ခြားနားချက်က နှိုင်းမရအောင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆုတောင်းနေကြတာထက်စာရင် မကောင်းတာကိုရှောင်ပြီး ကောင်းတာကို ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝဋ်တွေကြီးလို့ အပြစ်တွေကြီးမှာကို ကြောက်ပြီး ဒီလိုမျိုးနောင်မဖြစ်အောင် တောင်းဆုတွေ ချွေနေကြတာထက်စာရင် ဒီလိုဝဋ်ကျွေးတွေ ဖြစ်စေမယ့် အလုပ်မျိုးတွေ မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်တာက သဘာဝကျတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းကျိုးတွေ မဖြစ်အောင် တောင်းခြင်းထက် အဲဒါတွေကို မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ခြင်းက သဘာဝကျပြီး ရှောင်နေရုံနဲ့ မပြီးဘဲ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ကောင်းတာတွေကို ဆောင်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အပြစ်တွေကျေပြီး အနှစ်တွေ ဝေနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်တိုင်း မိန့်မှာတော်မူတဲ့ စကားသုံးခွန်းရှိပါတယ်။ မကောင်းတာကိုရှောင်ပြီး ကောင်းတာကိုဆောင်ဖို့၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ဖြူစင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုတဲ့ စကားသုံးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားတော်များဟာ သုံးခွန်းတည်းဆိုပေမယ့် အလွန်လေးနက် ကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ လိုက်နာဖို့ခက်သလို လိုက်နာနိုင်ရင်လည်း အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေဟာ စေတနာပါပါ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်မိရင် အကုသိုလ် အဆင့်ကိုကျော်ပြီး ဝဋ်ကျွေး အဆင့်အထိ ရောက်သွားတတ်ကာ အကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်နဲ့ ချေဖျက်နိုင်ပေမယ့် ဝဋ်ကိုတော့ ကျေအောင်ဆပ်မှပဲ ပြတ်စေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပလို့ ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာ ဝဋ်အဆင့်ကို ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆုတောင်းနေရုံနဲ့ မကျေပျောက်နိုင်ဘဲ ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးမှ ကျေပျောက်နိုင်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြီးမှ တောင်းနေကြတာထက်စာရင် မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်က ဗောဓိကုမာရ အမည်ရတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ဒီမင်းသားဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီးမထွန်းကားဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ မင်းသားဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဆွမ်းပင့်ကပ်ပါတယ်။ ဆွမ်းမကပ်ခင် ဘုရားရှင် ပြဿဒ်ပေါ်ကို ကြွတော်မူမယ့် နေရာမှာ ကော်ဇောအနီးခင်းပြီး ကြိုတင်ဆုတောင်း အဓိဋ္ဌာန်ပြုထားလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် ဒီအခင်းပေါ်က နင်းပြီးကြွရင် သားသမီး ရပါစေလို့ သူက ဆုတောင်းထားပါတယ်။ သူအဓိဋ္ဌာန်ပြု ဆုတောင်းတာကို သိလည်းသိ သူ့ရဲ့အတိတ်ကံ ဝဋ်ကျွေးကိုလည်း သိတော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်က ကော်ဇောအခင်းကို ဖယ်လိုက်ဖို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။ မင်းသားကလည်း ဘုရားရှင်ကို နင်းသွားစေလိုပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန် အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆိုပြီး ဘုရားရှင်က “မင်းသားအနေနဲ့ အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာ သင်္ဘောပျက်ပြီး ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ရောက်သွားတဲ့အချိန် စားရေးသောက်ရေးအတွက် အဲဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ငှက်ဥတွေကို နှစ်ပေါင်းအတော်ကြကြာ နှိုက်ယူစားသောက်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေး ရှိခဲ့တဲ့အတွက် သားသမီး မရနိုင်ကြောင်း” မိန့်တော်မူပြီး တရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ သာဓက ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရင် ဘုရားရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံရတဲ့ သူတွေတောင်မှ အကုသိုလ်ဝဋ်ကြွေးကို ဆုတောင်းလို့ မရနိုင်၊ မကျေနိုင် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ကံ အကျိုးပေးပါလာရင် ဘယ်သူချေဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်တဲ့အတွက် ကျန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကြွေးတွေကတော့ ရှိပါစေတော့။ အခုလက်ရှိဘဝမှာပဲ ဒီလိုအကုသိုလ်အကျွေးတွေ မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုချင်တဲ့အရာ၊ မဖြစ်ချင်တဲ့အရာ၊ မရချင်တဲ့ ရလာဘ်တွေဟာ ဆုတောင်းနေဖို့ထက် ဒီအရာတွေကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ဘဲ ရှောင်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးနဲ့ အသေချာဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကံရဲ့အကျိုးပေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ကြိုတင်လုပ်ယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အခုလက်ရှိတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ မကောင်းတဲ့ရလာဘ်တွေ၊ မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေဟာ အတိတ်ဘဝတစ်ခုခုက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အကုသိုလ်တွေရဲ့ အကျိုးရလာဘ်ဖြစ်နေပြီး ဒီရလာဘ်တွေ နောင်မတွေ့ဖို့ ဆုတောင်းနေတာထက်စာရင် ဒီလိုရလာဘ်မျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းဖို့ထက် ရှောင်ဖို့က အရေးကြီးကြောင်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတာကိုရှောင်ပြီးရုံနဲ့ မပြီးသေးဘဲ ကောင်းတာတွေ ရောက်လာဖို့အတွက် အကောင်းတွေကိုလည်း ဆောင်ထားဖို့လည်းလိုကြောင်း အသိပေးလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ ဒီအရာတွေ မရောက်လာဖို့ ဆုတောင်းလေ့ ရှိကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေကိုထားပြီး လက်ရှိရရှိနေတဲ့ အခြေအနေကိုပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး အခုလို မလိုချင်တဲ့အရာတွေ နောင်ရောက်မလာရအောင် ဘာမဖြစ်ရပါလို၏၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပါရစေ စသဖြင့် ဆုတောင်းနေဖို့ထက် အဲဒီအရာတွေကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားကြပါလို့ အသိပေးစကား ပြောကြားရင်း မကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီး ကောင်းမှုကိုဆောင်ကြဖို့ စေတနာစကား မေတ္တာအားဖြင့် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 5/30/2011 12:07:00 PM
၂၉-၅-၂၀၁၁ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မနေ့က ဘုန်းဘုန်းတို့ စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ဆရာ ကန်တော့ပွဲနဲ့ စာပေ ဆွေးနွေးပွဲလေး ကျင်းပပြုလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဒကာ ညီညာပေါင်းစုလို့ ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများရဲ့ ဒီကုသိုလ်ပွဲကတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု အမျိုးမျိုးတွေထဲက မတူညီတဲ့ တမူထူးခြား ကုသိုလ်တရား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများအတွက် ထူးခြားတဲ့ ကုသိုလ်ပွဲလို့ ဆိုရတာက အခုဒီပွဲမှာ အဝေးက ကြွရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာ ဆရာဖေမြင့်နဲ့ နိုင်ငံကျော် ပန်းချီကာတွန်းဆရာ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာ စတဲ့ ဘယ်လိုဆရာမျိုးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်လုံးတစ်ပါဒ အသိမျှပေးကြတဲ့ ဆရာများဟာ ကျေးဇူးကြီးမားကြတဲ့ ဆရာသမားများပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း အခုလို ဆရာသမားများ ကြွရောက်လာခဲ့ခြင်းဟာ တကယ့်ကိုပဲ အကျိုးတရား၊ ကျေးဇူးတရား များခဲ့ကြပါတယ်။
။ အချိန် 5/27/2011 05:54:00 AM
။ အချိန် 5/25/2011 11:10:00 AM
။ အချိန် 5/23/2011 08:57:00 AM
။ အချိန် 5/20/2011 04:15:00 PM
မှတ်မှတ်ရရ ပြီးခဲ့တဲ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့၊ ၁၇-၅-၂၀၁၁ရက်နေ့က ဖြစ်ပါတယ်။ အော်စီမှာ ရောက်နေတဲ့ ဒကာတစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓနေ့မှာ အရှင်ဘုရားကို သတိတရ ဖုန်းဆက်ပြီး ဦးတင်တာပါဘုရားလို့ လျှောက်ထားရင်း သူသိချင်တာလေးတွေလည်း မေးမြန်းလျှောက်ထားလာပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား သူမေးတဲ့ မေးခွန်းထဲမှာ ဒီနေ့ခေတ် သူတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်တွေ့နေတဲ့ အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူက “ဘုန်းဘုန်း သိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရား အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပည့်တော်တို့ ကိုးကွယ်ရမယ့် ဘုန်းကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က ဂိုဏ်းအမျိုးမျိုး၊ အဖွဲ့အမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဟောပြောပို့ချလာကြတော့ ဘုရားဟော တရားတွေကို အမှားအမှန် မသိတဲ့ တပည့်တော်တို့လို သူတွေက အဲဒီဘုန်းကြီး ဟောပြောတဲ့ တရားဟာ မှားလားမှန်လား မခွဲခြားတတ်တဲ့အပြင် အစစ်အမှန် ဆရာသမားကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမှန်း မသိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ် ဘုရား၊ အဲဒါ ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ တပည့်တော်တို့လို သူတွေအတွက် ဆရာမမှားရအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဘုရား” လို့ မေးမြန်း လျှောက်ထားပါတယ်။ “မှန်တယ် ဒကာတော်ရေ ဒကာတို့လို သူတွေအတွက် ကိုးကွယ်မှု မမှားရအောင် ဆရာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီးပဲ ရွေးချယ်ကိုးကွယ် ရတော့မှာဖြစ်တယ်”လို့ အကြံပြုရင်း ယုံကြည်မှုကို စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖို့ ပြောပြပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီဒကာလျှောက်သလိုပဲ အခုနောက်ပိုင်း ဟောပြောကြတဲ့ ဘုန်းကြီးအချို့တွေကလည်း စတိုလ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြဿနာ အမျိုးမျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒကာဒကာမတွေကို က စေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ၊ ကြွ စေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ၊ မ စေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ၊ ရွ စေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြောင့် အသိဉာဏ်နည်းလာတဲ့ သူတွေမှာ က တဲ့သူက က၊ ကြွတဲ့သူက ကြွ၊ ရွတဲ့သူက ရွ စသဖြင့် ဝါဒမှိုင်း မိကုန်ကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကန်းယုံကြည်မှု အားကောင်းပြီး ဆင်ခြင်ဉာဏ် နည်းလာကြတဲ့ သူတွေကလည်း ဘာမှမသိ လိုက်လုပ်မိရာက အမှားကို အမှားမှန်း မသိဘဲ ဆက်လျှောက်နေကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အယူဝါဒ တစ်ခုဆိုတာက ယုံကြည်မိရင် အသက်အသေခံပြီး ဆုတ်ကိုင်ထားတတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပညာ မပါဘဲ ယုံကြည်လက်ခံမိမယ်ဆိုရင် စွန့်လွှတ်ဖို့ အတော်ခဲရင်းတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုးကွယ်အားထားရာကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုကို စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ သတိထားပြီး ကိုးကွယ်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်တော့ အစစ်အမှန် ကိုးကွယ်ရာတွေက မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီးရှိပါတယ်။ အစစ်အမှန် ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ အကျင့်မှန် သူတော်သူမြတ်တွေ၊ ရဟန်းအလုပ်ကို လုပ်နေကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေဟာ မြန်မာမှာရော ကမ္ဘာမှာပါ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ စာပေသင်ကြားလေ့လာမှု ပရိယတ်အားကောင်းနေသမျှ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု ပဋိပတ်လည်း အားကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပြီး အကျင့်အားကောင်းနေသမျှ အကျိုးပဋိဝေဓ တရားများလည်း အားကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူမှု၊ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများ ရှိနေသမျှ သာသနာတော်မှာ ပရိယတ်အကျော်၊ ပဋိပတ်အကျော်များလည်း မဆိတ်သုဉ်းဘဲ ထင်ရှားရှိနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျေနပ်စရာကောင်းတာက ဒီလိုပရိယတ် ပဋိပတ်အားကောင်းနေသမျှ သာသနာတော်တွင်းမှာ မမှန်တဲ့ အကျင့်ရှိသူများ အကြာကြီး မတည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာက ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မမှန်တဲ့နည်းတွေ၊ မရိုးသားတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဘာနည်းညာနည်းတွေကို ဟောပြောပြသတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကို မလိုက်မိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို ယုတ္တိကျကျ ဝေဘန်ပိုင်းခြားကာ လက်ခံကျင့်သုံးသင့်သလား၊ မသင့်ဘူးလားဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး အမှားမလိုက်မိဖို့ပဲ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုအားကောင်းပြီး စူးစမ်းဆင်ခြင်မှု အားနည်းရင် အလွဲကိုးကွယ်မိတတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို သတိတရား လက်ကိုင်ထားပြီး ကိုးကွယ်ခံထိုက်လား၊ မထိုက်ဘူးလားဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဉာဏ်မပါတဲ့ နောက်လိုက်တွေ ရှိနေသမျှ ဝါဒဖြန့်လိုသူ၊ ဂိုဏ်းဂဏ ဖွဲ့စည်းလိုသူတွေကလည်း အများကြီး ရှိနေကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အမှားမလိုက်မိအောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား အမှားသမားတော်တွေ ရှိသလို အမှန်သမားတော်တွေလည်း ရှိနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ့်ကို အားကိုးအားထား ပြုထိုက်တဲ့ ဆရာသမားတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိစစ်ရွေးချယ် ကိုးကွယ်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုးကွယ်ရာအမှန်ကို ရွေးချယ်ဖို့ ကိုယ့်မှာအခက်အခဲ ရှိနေရင်လည်း ကိုယ်ကိုးကွယ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုးကွယ်ခံထိုက်လား၊ ဘုရားသားတော် ပီသအောင် ကျင့်ကြံဟောပြောမှု ရှိသလား ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး သံဃာဂုဏ်တော် ကိုးပါးထဲက ရှေ့လေးပါးဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရား တပည့်သား သံဃာတော်ဟာ
- ကောင်းစွာ ကျင့်ကြံတော်မူခြင်း သုပ္ပဋိပန္နဂုဏ်တော်
- ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်ကြံတော်မူခြင်း ဥဇုပ္ပဋိပန္နဂုဏ်တော်
- မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်အလို့ငှါ ကျင့်ကြံတော်မူခြင်း ဉာယပ္ပဋိပန္နဂုဏ်တော်
- ရိုသေမှုနှင့်လျော်စွာ ကျင့်ကြံတော်မူခြင်း သာမိစိပ္ပဋိပန္နဂုဏ်တော်များနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာလေးလောက် တော့ ရွေးချယ်စိစစ်တတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် အခြေအနေရ ဒီလေးချက်လောက်နဲ့ ပြည့်စုံနေရင်ကိုပဲ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုးကွယ်ခံထိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေးပါးမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတဲ့ အချက်က သိပ်ကိုတာသွားပါတယ်။ ဒကာဒကာမတွေကို ဆရာအဖြစ် ဟောပြောပို့ချပေးမယ့် ဘုန်းကြီးဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမှ မရှိဘူးဆိုရင် ဘုရားဟော မဟုတ်တာတွေကို အဟုတ်လုပ်ပြီး ဟောပြောပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သလို လူတွေအထင်ကြီးအောင် သာသနာတော်နဲ့ မလျော်တဲ့ အသက်မွေးမှုတွေနဲ့ စည်းရုံးဆွဲဆောင်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်တော့ပါဘူး။ အထင်ကြီးဖို့၊ ကျော်ကြားဖို့၊ ဂိုဏ်းဂဏဖွဲ့ဖို့အတွက် ဝိနည်းတော်ကိုမေ့၊ ဘုရားဟောကို ငါဟောလုပ်လေ့ ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်လိုမှကို ရိုးသားမှုဂုဏ် မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘုန်းကြီးရဟန်းဖြစ်ပြီး ရိုးသားမှုမှ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားမှုရှိမှ ယုံကြည်မှုလည်း ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိမှ ကိုးစားမှုလည်း ရှိကာ ကိုးစားနိုင်မှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ကောင်းနိုင်မှာဖြစ်လို့ ကိုးကွယ်သူတွေ အနေနဲ့ အကိုးကွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ရွေးချယ်ကြဖို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ လက်တွေ့ဆန်ပြီး စိစစ်ခံနိုင်၊ မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းစနစ်နဲ့သာ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် အကျိုးတရားကို လက်တွေ့ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သီလအကျင့်ကောင်းအောင်၊ သမာဓိတည်အောင်၊ ပညာရအောင် ဟောကြားပေးထားတာတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ကိလေသာများအောင်၊ လောဘဒေါသပွားအောင်၊ မာနများအောင် စသဖြင့် ဟောကြားပေးထားတာတွေ မရှိပါဘူး။ ကိလေသာ ထူပြောစေတဲ့ အဆိုအက သင်တန်းပေးတာတွေ ဆိုတာကတော့ ပြောစရာကို မလိုလောက်အောင် ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားမှုမှာ မရှိတာဟာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဟောကြားပေးတဲ့ တရားမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ တီထွင်ကြတဲ့ အယူအကျင့်တွေမှာဆိုရင်တော့ ကိလေသာ တိုးပွားတာတွေ၊ လောဘဒေါသမာန အားကောင်းလာတာတွေ ရှိလာမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ချို့ ဘယ်နည်းကို ကျင့်ပြီးမှ ဘာတွေပိုတိုးလာတာ၊ လောဘဒေါသစတာတွေ ပိုများလာတာ၊ ငါ့ဆရာ ငါ့ဝါဒစတဲ့ ငါစွဲတွေ ပိုများလာတာတွေလည်း ရှိလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မမှန်တဲ့နည်းနဲ့ မမှန်တဲ့ဆရာကို ကိုးကွယ်မိကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မရိုးမသား တစ်မျိုးသွားနေကြတဲ့ အကိုးကွယ်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားများပြားလာတဲ့ ခေတ်ကာလကြီးမှာ ကိုးစားရာအမှန်ကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နိုင်ကြဖို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ကိုးကွယ်ကြည့်ကြဖို့နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ရွေးချယ်ကြည့်ကြဖို့ အသိပေးလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တဲ့ ဆရာသမားဟာ ကိုယ်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကောင်းကျိုး သံသရာကောင်းကျိုးကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဖို့၊ အကုသိုလ်ကို ပယ်စေပြီး ကုသိုလ်ကို ဆောင်ယူနိုင်အောင် တည့်မတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဖို့၊ အကျင့်လည်းကောင်း အနှစ်လည်းလောင်းပေးတဲ့ အသိအကျင့် ထပ်တူဆင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ရွေးချယ်ကိုးကွယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အယုံအကြည် လွယ်တတ်ကြတဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာ မျက်ကန်းယုံကြည်တတ်တဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုး မဖြစ်အောင်နဲ့ အယုံလွယ်တဲ့အတွက် အလွဲကိုးကွယ်မိတတ်တဲ့ ကိုးကွယ်မှု အမှားမဖြစ်ရအောင် ယုံကြည်မှုကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ကိုးကွယ်သင့် ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ ကိုးကွယ်ရာ အမှန်ကိုသာ စိစစ်ရွေးချယ် ကိုးကွယ်ကြပါလို့ အသိပေးရင်း ကိုးကွယ်ရာမှ ဘေးမဖြစ်စေဖို့ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ရွေးစစ်ကြဖို့ စေတနာစကား မေတ္တာအားဖြင့် တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 5/18/2011 08:09:00 AM
ကိလေသာ ဆယ်ပါးတွင် လောဘသည် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်၏။ လောဘသည် သတ္တဝါများအား ပူလောင်မှုကို ဖြစ်စေသဖြင့် ထိုလောဘကို ပယ်သတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအများ လက်ခံထားကြ၏။ သို့သော် အချို့က ထိုလောဘ၏ သဘောအမှန်ကို မသိကြသဖြင့် သို့လောသို့လော သံသယများ ရှိနေတတ်ကြ၏။ လောဘ၏ သဘောလက္ခဏာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုချင်တပ်မက်မှုကို လောဘဟုဆိုကြောင်း ဖွင့်ဆိုသဖြင့် လောဘနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို အများအပြား အမေးခံရဖူး၏။ အချို့က “ကုသိုလ်လိုချင်ခြင်းသည် လောဘဖြစ်မဖြစ်၊ ဒုက္ခငြိမ်းလိုခြင်းသည် လောဘဖြစ်မဖြစ်” စသည်ဖြင့် မေးလာကြသကဲ့သို့ အချို့လည်း “အဲဒီလိုဆိုရင် နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလည်း လောဘပဲ မဟုတ်ဘူးလား ဘုရား”ဟု မေးလာတတ်ကြ၏။ လောဘကို ပယ်သတ်ရမည်ဆိုသဖြင့် “ကုသိုလ်လိုချင်မှု၊ ဒုက္ခငြိမ်းလိုမှု၊ တရားလိုချင်မှု စသည်များကိုလည်း ပယ်ရမလိုဖြစ်ကာ ထိုအလုပ်များကို မလုပ်ဘဲ နေရမလို ဖြစ်နေကြောင်း” အချို့က ဆိုတတ်ကြ၏။ ဤသို့ဖြင့် စာရေးသူမှာလည်း စာရေးသူထံ ရောက်လာကြသည့် ထိုသို့ သို့လောသို့လော သံသယများဖြင့် မေးလာကြသည့် မေးခွန်းရှင်များအား “ထိုသဘောသည် လောဘမဟုတ်ကြောင်း၊ ဆန္ဒသာ ဖြစ်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ဖြေကြားပေးရင်း လောဘနှင့်ဆန္ဒအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း တင်ပြပေးရန် အကြောင်းဖန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
စင်စစ် စာပေအဖွင့်များကို ကြည့်ပါက လောဘနှင့်ဆန္ဒသည် တခြားစီသာ ဖြစ်ပါ၏။ လောဘ၏ သဘောသည် လိုချင်ခြင်း သဘောရှိသကဲ့သို့ ဆန္ဒ၏ သဘောသည်လည်း လိုချင်ခြင်း သဘောရှိသည် မှန်သော်လည်း လောဘ၏ လိုချင်မှုသည်ကား ကာမဂုဏ်ဆိုင်ရာများတွင် လိုချင်မှုဖြစ်ပြီး ဆန္ဒ၏ လိုချင်မှုသည်ကား ကောင်းသည့်အရာများတွင် လိုချင်မှုမျိုး ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် လိုချင်မှု သဘောသဘာဝအားဖြင့် တူသည်ဟုဆိုသော်လည်း ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် လိုချင်မှုများကိုကား လောဘဟုဆို၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများတွင် လိုချင်သည့် သဘောကိုကား ဆန္ဒဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ၏။ လောဘ၏ လိုချင်မှုသည် စွဲလမ်းခြင်း ကပ်ငြိခြင်း သဘောများ လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း ဆန္ဒ၏လိုချင်မှုသည် ပြုလိုချင်း ရယူလိုခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် မရမကလိုချင်မှု၊ ရပြီးရင်းရလိုရင်း သဘောဖြင့် လိုချင်မှု၊ ရလာသည့် အရာများတွင်လည်း တွယ်တာကပ်ငြိထားလိုမှု သဘောမျိုးကို လောဘဟုဆိုပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်မှု၊ တရားကိုလိုချင်မှု၊ စာပေတတ်ချင်မှု၊ ဆင်းရဲသူများအား ပေးကမ်းလို၊ အလှူဒါနပြုလို၍ ပစ္စည်းဥစ္စာကို လိုချင်မှု စသည့် ကောင်းသောအရာများ၌ လိုချင်မှု သဘောမျိုးကိုကား ဆန္ဒဟုသာ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓစာပေများတွင် လောဘကို အခြားဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများဖြင့်လည်း ဖွင့်ဆိုရှင်းပြကြ၏။ လောဘကို ချစ်ခင်ခြင်း ပေမဟုလည်းကောင်း၊ တပ်မက်ငတ်မွတ်ခြင်း တဏှာဟုလည်းကောင်း၊ တွယ်တာခြင်း သမုဒယဟုလည်းကောင်း၊ ကာမဂုဏ်အာရုံ မေထုန်အမှုများတွင် အလွန်လိုလား စွဲလန်းခြင်း ရာဂဟုလည်းကောင်း စသည်ဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဥပမာပေးထား၏။ မိဘသားသမီး၊ ဇနီးမယား၊ သမီးသား၊ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၌ ချစ်ခင်ခြင်းမျိုးကို ပေမဟုဆိုကာ ထိုချစ်ခြင်းကိုပင် သံယောဇဉ်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသံယောဇဉ်သည် ကြိုးဖြင့်ချည်နှောင် ထားသကဲ့သို့ မကွဲမကွာ ဖြစ်နေလိုခြင်း သဘောရှိ၏။ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ဟူသော ဤငါးပါးကို လူအများ လိုလားအပ်သောကြောင့် ကာမဂုဏ်ဟုဆိုကာ ထိုကာမဂုဏ်သည် သာမာန်လိုချင်မှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ အငန်းမရ လိုချင်မှုမျိုးဖြစ်သဖြင့် ထိုလိုချင်မှုမျိုးကို တဏှာဟုဆို၏။ ထိုကာမဂုဏ်ငါးပါးတွင် အတွေ့အာရုံ မေထုန်အမှု၌ အလွန်လိုလားခြင်းကို ရာဂဟုဆိုပြီး ထိုရာဂတွင် ငြိကပ်ခြင်း၊ စွဲလမ်းခြင်း သဘောများ ပါဝင်နေပေ၏။ ထိုသို့ တဏှာပေမရာဂစသည့် သဘောများ လွှမ်းမိုးပါဝင်ထားသဖြင့် ကာမဂုဏ်စသည့် အရာများတွင် လိုလားတပ်မက်မှုမျိုး၊ လိုချင်တောင့်တမှုမျိုးကို လောဘဟုဆိုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ဆန္ဒနှင့်ပတ်သက်၍ကား ဆန္ဒသည် အာရုံတစ်ခုခုကို ပြုလိုခြင်း ရယူလိုခြင်းသဘော သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုရှင်းပြ၏။ ထိုဆန္ဒ၏ သဘောသည် သတ္တဝါများတွင် အလွန်ထင်ရှားလှ၏။ ဥပမာအားဖြင့် ကလေးငယ်သည် ဖခင်လက်မှ မိခင်လက်သို့ လိုက်ချင်သဖြင့် လက်လှမ်းမှုသည် အခြားကြီးမားသည့် တပ်မက်တွယ်တာ ကပ်ငြိမှုသဘော မရှိဘဲ လိုက်ချင်မှု သက်သက်သာ ဖြစ်သဖြင့် ထိုသဘောသည် ဆန္ဒသာ ဖြစ်ပါ၏။ တစ်နေရာသို့ သွားချင်လာချင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တွေ့ချင်မြင်ချင်၊ ကြားချင်နာချင်၊ နမ်းချင်စားချင်၊ ကိုင်ချင်ထိချင်၊ တတ်သိနားလည်ချင် စသည့် သဘောမျိုးသည် ဆန္ဒ၏ သဘောမျိုးသာ ဖြစ်၏။ ထို့အတူ နိဗ္ဗာန်လိုချင်၊ အဂ္ဂသာဝက မဟာသာဝကဖြစ်ချင်၊ ဘုရားဖြစ်ချင်၊ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချင်၊ သူဌေးဖြစ်ချင်၊ နတ်ဖြစ်ချင်၊ ဗြဟ္မာဖြစ်ချင်၊ ရသေ့ရဟန်းပြုချင်၊ လှူဒါန်းချင်၊ ဥပုသ်စောင့်ချင်၊ ကုသိုလ်ရချင် စသည့် ဖြစ်ချင်မှု မှန်သမျှသည်လည်း အားလုံး ဆန္ဒပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဆန္ဒ၏ သဘောသည် ဖြစ်လိုချင်မှု စိတ်ဆန္ဒသက်သက်သာ ဖြစ်၏။ လောဘကဲ့သို့ အငန်းမရ တွယ်တာနေမှုမျိုး မဟုတ်လှပေ။ စင်စစ် ကောင်းသည့်အရာများတွင် ဤသို့သော အာသာဆန္ဒမျိုးကို အရင်းခံထားမှသာ ဝိရီယစိုက်ပြီး အားထုတ်ကာ လိုချင်သည့်ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် ထိုဆန္ဒသည် သတ္တဝါများတွင် ရှိသင့်သည့် သဘောပင် ဖြစ်၏။ ထိုသို့သော အာသာဆန္ဒမျှ မရှိလျှင် ဘုရားရဟန္တာစသည့် သူတော်ကောင်းများလည်း ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းမရှိလှပေ။ ထိုသူတော်ကောင်းများထံတွင် ရှိသည့် အာသာဆန္ဒသည် တပ်မက်တွယ်တာ၊ စွဲလန်းကပ်ငြိတားသည့် လောဘမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြုလိုရုံ ရလိုရုံသက်သက်သာ ဖြစ်သည့် ဆန္ဒမျိုးသာ ဖြစ်ပါ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ လူအတော်များများက တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလိုမှု၊ ရလိုမှု စသည့် လိုချင်ရချင်သည့် အရာမှန်သမျှသည် “လိုချင်”ဟူသော ဝေါဟာရသဘောများ ပါဝင်နေသဖြင့် လောဘဟုနားလည်ထားကြသည့် ထိုနားလည်မှုသည် စင်စစ်အားဖြင့် လောဘနှင့်ဆန္ဒသဘောကို ကွဲပြားစွာ နားလည်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။ ဖြစ်ချင်၊ ရချင်၊ သိချင်တတ်ချင် စာသည့် ‘ချင်’ ဟူသည့် သဘောအဓိပ္ပါယ်များ ပါဝင်တိုင်း လောဘဟု သတ်မှတ်၍ မရဘဲ ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် တွယ်တာကပ်ငြိကာ အငမ်းမရ လိုပြီးရင်းလိုနေကြသည့် သဘောမျိုးသည်သာ လောဘသဘောမျိုး သက်ရောက်ပြီး ကောင်းသည့်စိတ်စေတနာဖြင့် ကောင်းသည့်အရာများတွင် ရယူချင်၊ လုပ်ပေးချင်၊ လွတ်မြောက်ချင်၊ ကယ်တယ်ပေးချင်၊ ထွက်မြောက်ချင် စသည့် “ချင်ခြင်း”များသည်ကား ဖြစ်ချင်ရချင်မှု သက်သက်သာရှိသည့် ဆန္ဒသဘောမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် အပြောအဆိုအသုံးအနှုန်းနှင့် စိတ်စေတနာများတွင် “ချင်၊ လို” စသည့် သဘောများပါနေလျှင် လောဘဟုသာ ထင်နေတတ်ကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာများအနေဖြင့် ဤနေရာ၌ အထူးသတိပြုသင့်သည်မှာ ချင်တိုင်းလိုတိုင်း လောဘမဟုတ်ဘဲ ကောင်းသည့်အရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် ချင်လိုစသည်များကား တွယ်တာကပ်ငြိထားခြင်း မရှိဘဲ ဖြစ်ချင်လိုချင်ရချင်မှု သက်သက်သာရှိသည့် ဆန္ဒသာ ဖြစ်သည်၏ အဖြစ်ကို သဘောပေါက် နားလည်ကာ ထိုသို့သော ကောင်းသည့်ဆန္ဒများကို အခြေတည်ကာ ဝိရီယ၊ ပညာ၊ သတိတရားများဖြင့် ကောင်းသည့်အရာများမှသည် နိဗ္ဗာန်အထိ ရရှိအောင်သာ ကြိုးစားရမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ လောဘ၏လိုချင်မှုသည် ပူလောင်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ဆန္ဒ၏ လိုချင်မှုသဘောသည်ကား ငြိမ်းအေးမှုကို ဖြစ်စေသဖြင့် လောဘကိုပယ်ပြီး ဆန္ဒကို အရင်းတည်ကာ ပစ္စုပ္ပန်သံသရာ ကောင်းစေမည့် အလုပ်များကိုသာ ဝိရိယစိုက်၍ ကြိုးစားလိုက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းရင်း လောဘနှင့်ဆန္ဒအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
။ အချိန် 5/14/2011 12:21:00 PM
ပံသုကူ (ပံ့သကူ) အလှူနဲ့ ထီပေါက်မှု/ မပေါက်မှု
မနှစ်က ဘုန်းဘုန်းမြန်မာပြည်မှာရှိတုန်း ပို့ချခဲ့တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုမှာ သင်တန်းသားတွေကို မသိတာရှိရင် မေးပါဆိုတော့ ဒကာမကြီး တစ်ယောက်က “ဘုန်းဘုန်းဘုရား ပံ့သကူပစ်ရင် ထီပေါက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားဘုရား” လို့ မေးဖူးပါတယ်။ ဒကာမကြီးရဲ့ အမေးကိုကြားတော့ “ဘယ်ကဘယ်လို ကြားလာတာလဲ ဒကာမကြီးရယ် အဲဒီလိုဆို ဘုန်းဘုန်းတို့လည်း ဒီပေါက်အောင် ပံ့သကူပဲ ပစ်နေမှာပေါ့”လို့ ပြန်ပြောရင်း မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအချို့ရဲ့ လွဲနေတဲ့ အယူအဆလေးများအကြောင်း ရှင်းပြပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကလည်း ဒကာတစ်ယောက်က “အရှင်ဘုရားရေ တိုက်ဆိုင်တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး၊ တပည့်တော် မနှစ်က သီတင်းကျွတ်တုန်းက စာသင်တိုက်တစ်ခုထဲမှာသွားပြီး ပံ့သကူသင်္ကန်းတစ်စုံ ပစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီကအပြန် ထီလည်းထိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထီထွက်လာတော့ တပည့်တော် နှစ်သိန်းဆု ပေါက်တယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်ကတော့ ဒီလိုကံကောင်းလာတာ အဲဒီတုန်းက လှူခဲ့တဲ့ ပံ့သကူ သင်္ကန်းအလှူကြောင့်ပဲလို့ ထင်တယ်ဘုရား” စသဖြင့် လျှောက်ဖူးပါတယ်။ သူ့စကားအတိုင်း “ဟုတ်တယ် ဒကာရေ၊ ဒကာပြောသလိုပဲ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ”လို့ ပြောရင်း ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ သဘောကို ပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အချို့မှာ ပံသုကူအလှူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပံသုကူပစ်ရင် ဘာပေါက်တယ်၊ ညာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအစွဲ အလွဲလေးတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လွဲဆိုရင် အခေါ်အဝေါ်ကစပြီး လွဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခေါ်နေကြတာက ပံ့သကူလို့ ခေါ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်လည်းမသိ အခေါ်လည်း လွဲနေပေမယ့် ဒီလွဲနေတာကို လွဲနေမှန်း မသိဘဲ ပြောဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ ပံ့သကူဆိုတာ ပံသုကူလိကဆိုတဲ့ ပါဠိစကားက ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပံသုဆိုတာ မြေ၊ မြေမှုန့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ကူလိကဆိုတာ လိမ်းကျံခြင်း၊ လွှမ်းမိုးကျရောက်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဆိုတော့ကား ပံသုကူလို့ပြောရင် မြေမှုန့်လိမ်းကျံနေတဲ့ စွန့်ပစ်အရာလို့ အလွယ်နားလည်ထား နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မြေမှုန့်လိမ်းကျံနေတဲ့ အရာတွေကို ကောက်ယူသုံးဆောင်ခြင်းကိုပဲ ပံသုကူဆောင်လို့ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပံသုကူသင်္ကန်းဆိုရင်လည်း အများက မသုံးဆောင်တော့ဘဲ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အဝတ်အပိုင်းအစတွေကို ကောက်ယူသန့်စင်ပြီး သင်္ကန်းအဖြစ် ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ သင်္ကန်းမျိုးကိုဆိုပြီး ဒီသင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံသုံးဆောင်တဲ့ ရဟန်းကို ပံသုကူဆောင် ရဟန်းလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုသဘောမျိုးကို ယူပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ပံသုကူဆောင် ရဟန်းတော်များ ရှိသလို ပံသုကူပစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပံသုကူပစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်ရဟန်းကိုမှ မရည်ရွယ်ဘဲ ရဟန်းတော်များ အသွားအလာများတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ သင်္ကန်းစတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပံသုကူပါဘုရားဆိုပြီး ရေးသားစွန့်ပစ် လှူဒါန်းထားတာကို ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို သီးသန့်ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတာမဟုတ်ဘဲ ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ခံယူသုံးဆောင်ဖို့ စွန့်လှူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလှူအနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက အလှူထက် ပိုပြီးအကျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးထူးရှိတဲ့ အတွက်လည်း တစ်ချို့က ပံသုကူအလှူကို လှူကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ပံသုကူကို ကိုယ်ကောင်းစားရေးအတွက် အသုံးချတတ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဆရာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ “ထီပေါက်ကိန်းရှိတယ်၊ ဘယ်မှာသွားပြီး ဘာလေးကိုတော့ ပံသုကူပစ်လိုက်ပါ”လို့ ပြောတာကို လူတွေက လိုက်လုပ်ရင်း ပံသုကူအလှူနဲ့ ထီကိစ္စလေးတွေက ပြောစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ချို့လည်း အဲဒီလို ပံသုကူပစ်ပြီးတော့မှ ဘာပေါက်တာ၊ ညာပေါက်တာတွေ ဖြစ်လာတော့ ဒါ ပံသုကူပစ်လိုက်လို့ပဲ ဆိုတာတွေလည်း ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒါဟာ ပံသုကူပစ်လို့ ဖြစ်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုသာ ဖြစ်ကြေးဆိုရင် လူတိုင်းပံသုကူပစ်ပြီး လူတိုင်းထီတွေ ချဲတွေပေါက်ကုန်ကြတော့မှာပေါ့။ ပြောရရင် အတော်လေးကို လွဲနေတော့တာပါ။
အမှန်တော့ ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပံသုကူပစ်လို့ ထီပေါက်တာဆိုရင်လည်း ပံသုကူကြောင့်ဆိုတာထက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လို့ ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကိုကံနဲ့ ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အကျိုးပေးကောင်းတွေ ဖြစ်လာတာဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ကံဆိုတာ အတိတ်ကံရှိသလို ပစ္စုပ္ပန်ကံလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အတိတ်က ကောင်းကံလေးတွေ အကျိုးပေးချင်ပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန် မကောင်းကံတွေက အားကြီးနေရင် အတိတ်ကံ အကျိုးပေးခွင့် မသာသလို အတိတ်က မကောင်းကံလေးတွေ အကျိုးပေးချင်ပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန် ကောင်းကံတွေက အားကြီးနေရင်လည်း အတိတ်က မကောင်းကံတွေ အကျိုးပေးခွင့် မသာပြန်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကောင်းကံတွေ အားကြီးအောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှု များများလုပ်စေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနပြောခဲ့သလို ပံသုကူအလှူ လှူလိုက်ချိန်မှာ ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သူတွေမှာလည်း ဒါဟာ အတိတ်ကံကို ပစ္စုပ္ပန်ကောင်းကံလေးတွေနဲ့ ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်တွေ့မှာ ကောင်းကံလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဆရာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က ထီပေါက်လိမ့်မယ် ပံသုကူပစ်လိုက်ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ထီပေါက်လာတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ အသေချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ပံသုကူပစ်ရင် ထီပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအစွဲဟာ မမှန်ဘူးဆိုတာနဲ့ အကယ်၍ တိုက်ဆိုင်လို့ ထီပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ကုသိုလ်ကံကြောင့် ကံပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပံသုကူပစ်တိုင်းသာ ထီပေါက်ကြမယ်ဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပံသုကူပဲ ပစ်နေကြဖို့တောင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် တကယ်တော့ ဒီလိုကောင်းကျိုးလေးတွေ ဖြစ်လာတာဟာ ပံသုကူကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကံကိုကောင်းကံတွေနဲ့ ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကောင်းကျိုးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ ပြောပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ခြင်းဆိုတာ အထင်အရှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အချို့ရဲ့ လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲအစွဲတွေထဲမှာ ပံသုကူအလှူဟာ ထီပေါက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအစွဲလေးများလည်း ရှိနေတတ်တဲ့အတွက် တိုက်ဆိုင်လို့ ထီတွေဘာတွေ ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ပံသုကူပစ်လို့ ထီပေါက်တယ်ဆိုတာထက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် ကောင်းကျိုးလေးတွေ ဖြစ်လာတဲ့ သဘောပဲဆိုတာကို သေချာသဘောပေါက် နားလည်လက်ခံပြီး ဒီထက်မက ကောင်းကျိုးရချင်ရင်တော့ ဒီထက်မက မကောင်းမှုရှောင်ပြီး ကောင်းမှုကိုသာ ဆောင်ကြဖို့နဲ့ အစွဲတရားနဲ့ လွဲမှားနေမယ့် အလွဲများအစား အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တတ်တဲ့ ကံတရားကိုသာ အလေးထားပြီး လွဲနေတာကို မလွဲအောင်သာ ကြိုးစားကြပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 5/11/2011 06:55:00 PM
။ အချိန် 5/08/2011 01:39:00 PM
Q. ဘုန်းဘုန်း သိချင်တာလေး ရှိလာလို့ ရိုသေစွာ မေးလျှောက်အပ်ပါတယ် ဘုရား။
တစ်နေ့က တပည့်တော် ဘုရားခန်းထဲထိုင်နေရင်း ကျေးဇူးတရားအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် သိတာက
၂။ သိတဲ့အတိုင်းလည်း ပြန်ဆပ်ရမယ်
၃။ မဆပ်နိုင်တောင် ကျေးဇူးကို ချေဖျက်တဲ့အရာမျိုး မလုပ်ရဘူး.. စသဖြင့်
မိဘ၊ ဆရာသမား၊ မိတ်ဆွေတွေလိုမျိုး လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် ကျေးဇူးဆပ်တာတော့ ထိုက်သင့်သလောက် တပည့်တော် နားလည်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း။ အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆပ်နည်းက တရားဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ရမယ် ဆိုတာ..
ဒါပေမယ့် ရဟန်းသံဃာတွေရဲ့ ကျေးဇူးကိုကျတော့ ဘယ်လိုဆပ်ရမလဲ ဘုရား။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ ဘုန်းဘုန်းတို့ ရေးတဲ့ဆိုဒ်တွေကို ၀င်ဖတ်တယ်။ တရားအသိတွေရတယ်၊ ဒါဆိုရင်ပဲ ကျေးဇူးကရှိသွားပြီ။ အဲ အဲလိုမကပဲ ဘုန်းဘုန်းတို့ဆီက တိုက်ရိုက်အဆုံးအမစကား တစ်ခွန်း ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် တရားတစ်ပုဒ်တစ်လေ နာကြားရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဆိုရင် ကျေးဇူးက ပိုများသွားပြန်ကော။
အဲလို၊ အဲလို တပည့်တော်အပေါ် ကျေးဇူးရှိဖူးတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တော်တော်လေးကို အရေအတွက် များနေတာကို တွေ့ရတယ်ဘုရား။
- အဲဒါ တကယ်လို့ တစ်ပါးချင်းစီ ဆပ်နိုင်မယ်ဆို၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပါးပါးကို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ဆပ်ခွင့်ကြုံပြီဆို ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ရမလဲ ဘုရား၊
- ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေမလဲ ဘုန်းဘုန်း
- အဆုံးအမတွေကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးတာ အကောင်းဆုံး ဆိုခဲ့ရင်လည်း.. ဒီ့အပြင် တခြား ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်လို့ ရနိုင်သေးလဲ ဘုရား
- နောက်ပြီး ကျေးဇူးရှိတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေက များလွန်းတော့ အားလုံးကိုခြုံပြီး ကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆို ဘယ်လိုနည်းက သင့်လျော်ပါသလဲ ဘုန်းဘုန်း။
- ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နည်းလေးများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ရိုရိုသေသေ ဖတ်ရှု နာကြားချင်ပါတယ်ဘုရား။
A. ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်တွေထဲမှာ သူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလို့ ဘုရားဟောပါတယ်။ ကျေးဇူးတရားဆိုတာ ကျေးဇူးကို မသိတတ်တဲ့သူတွေ အများကြီးထဲက ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ သိတတ်ရင်ကိုပဲ အတော်လေး ဟုတ်နေပါပြီ။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျေးဇူးတရား ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကာ ဒီကျေးဇူးကို ပြန်ဆပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အကယ်၍ အခွင့်မသာလို့ ပြန်မဆပ်နိုင်တာတောင်မှ ကျေးဇူးရှင်ကို မစော်ကားမိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်တာဟာ တာဝန်မကျေရုံလောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျေးဇူးရှင်ကို စော်ကားမိရင်တော့ ဒါဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြန်ခံရတဲ့အထိ ပေးဆပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ဖို့ လိုသလို သိပြီးရင်လည်း ပြန်ဆပ်တတ်ဖို့လိုကာ ပြန်မဆပ်နိုင်သေးရင်လည်း ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးမစွပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတရားကို ပြန်ဆပ်ဖို့ကတော့ ဒကာလေး ပြောသလို တရားနဲ့ဆပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားနဲ့အညီ၊ ဆရာသမားများရဲ့ ဆုံးမသြဝါဒနဲ့အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဟာ ကျေးဇူးတရားကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို မဆပ်နိုင်သေးပါက တရားဓမ္မနဲ့ ဆပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘနဲ့ ဆပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နည်း နှစ်မျိုးထဲက ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ ဆပ်နိုင်ရင်လည်း ကျေးဇူးကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဆရာဒကာဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတင်ထိုက်၊ ကျေးဇူးဆပ်ထိုက်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးဆပ်မှုမှာ ရဟန်းတော်များက ဒကာဒကာမများရဲ့ ကျေးဇူးကို ဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်နိုင်ပြီး ဒကာဒကာမများကတော့ ရဟန်းသံဃာတော်များကို အာမိသဆိုတဲ့ ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ဆရာဒကာများကြားမှာ လိုက်နာကျင့်ကြံရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရားများနဲ့အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်ခြင်းဟာလည်း အချင်းချင်း ကျေးဇူးဆပ်နေခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတော့ သိင်္ဂါလသုတ်မှာ ဘုရားဟောထားတဲ့ လူဒကာဒကာမတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်ငါးပါးကိုပဲ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူဒကာဒကာမတွေ အနေနဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များ အပေါ်မှာ
၁။ မေတ္တာနဲ့ယှဉ်တဲ့ ကာယကံမှုကိုပြုခြင်း
၂။ မေတ္တာနဲ့ယှဉ်တဲ့ ဝစီကံမှုကို ပြုခြင်း
၃။ မေတ္တာနဲ့ယှဉ်တဲ့ မနောကံမှုကို ပြုခြင်း
၄။ အလောဘတံခါးကို ဖွင့်ထားခြင်း (အလိုရှိသည့်အခါ အလှူခံဖို့ ဖိတ်ကြားခြင်း)
၅။ ဆွမ်းစတဲ့ အာမိသတို့ကို ပေးလှူခြင်း ဆိုတဲ့ အချက်ငါးချက်နဲ့အညီ နေထိုင်ကျင့်သုံးဖို့ ဟောကြားထားပါတယ်။ လူဒကာဒကာမများ အနေနဲ့ ဒီကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ကျေးဇူးဆပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငါးပါးမှာ အဓိကကတော့ မေတ္တာတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတရား များများရှိလေ အဲဒီရဟန်းသံဃာတော်ကို မေတ္တာများများ ပို့ပေးလေဆိုရင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ ကျေးဇူးဆပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် တတ်နိုင်သမျှ ကျေဇူးရှင် ရဟန်းသံဃာတော်တို့ လိုအပ်တဲ့ ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ ဆေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအာမိသများကို ပေးလှူပေးနေခြင်းဟာလည်း ကျေးဇူးဆပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓလက်ထပ်တော် အခါက မာတိကာမာတာဆိုတဲ့ ဒကာမကြီးတစ်ယောက်ဟာ ရွာကိုတရားအားထုတ်ဖို့ ကြွလာတဲ့ ရဟန်းတော်များအထံက ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို အားထုတ်ပြီး အနာဂါမ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးတဲ့ ရဟန်းတော်များကတော့ တရားမရနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သူ့ရဟန်းများ တရားမရတာဟာ ဘာကြောင့်ဆိုတာသိတဲ့ ဒကာမကြီးက ရဟန်းတော်များနဲ့ သင့်တော်မယ့် ဆွမ်းအာဟာရ စတဲ့လိုအပ်ရာရာတွေကို စီမံဖန်တီး လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ဒကာမကြီးရဲ့ စီမံဖန်တီးမှုကို ခံယူပြီး ရဟန်းတော်များဟာ တရားကို ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာ တစ်ပါးပြီးတစ်ပါး တရားရသွားခဲ့ပါတယ်။ မာတိကာမာတာ ဒကာမကြီးဟာ ရဟန်းတော်များရဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား ပြသမှုကျေးဇူးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့တရားအားထုတ်ခြင်း၊ ရဟန်းတော်များ လိုအပ်တဲ့ ဆွမ်းအစရှိတဲ့ အာမိသကို လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ကာ ရဟန်းတော်များကို တရားရသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် လူဒကာဒကာမများ အနေနဲ့ ရဟန်းတော်များအပေါ် လိုအပ်တဲ့ အာမိသဝတ္ထုများ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ ပေးနေတာဟာလည်း ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးဆပ်နေရာ ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်မယ်၊ မေတ္တာလည်းပွားမယ်၊ အာမိသလည်း ထားမယ်ဆိုရင် လူတွေအနေနဲ့ ရဟန်းတော်များရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို အထိုက်အလျောက် ဆပ်နေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဒကာလေးအပေါ် ကျေးဇူးများတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များအား ကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီရဟန်းတော်များ သင်ကြားဟောကြားပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးရှင် ရဟန်းတော်များကို မေတ္တာများများ ပို့သပေးခြင်း၊ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ လက်တွေ့ကြုံဆုံခွင့်ရရင် မေတ္တာနဲ့ယှဉ်တဲ့ ကိုယ်နှုတ်စိတ် အမူအရာတွေနဲ့ ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း၊ ကျေးဇူးရှင် ရဟန်းသံဃာတော်များအား လိုအပ်တဲ့ ဆွမ်းစတဲ့ အာမိသများကို တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခြင်း စတဲ့နည်းတွေနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးများရင်များသလို တစ်ပါးချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို ခြုံပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်းကတော့ မေတ္တာတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားလည်းကျင့်မယ်၊ မေတ္တာလည်း ပို့သပေးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အကောင်းဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခြင်းဖြင့်လည်း အာမိသနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်သလို ရဟန်းတော်များ တရားဓမ္မ အားထုတ်နိုင်ဖို့ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း၊ တရားဓမ္မ ဆွေးနွေးပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဓမ္မနဲ့အညီ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတွေများလွန်းလို့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဒကာလေးအနေနဲ့ တရားနဲ့အညီ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ဖို့ တရားလည်းကျင့်၊ ကျင့်သိတဲ့အတိုင်းလည်း ဟောပြော၊ ကျင့်ဝတ်များလည်း ဖြည့်ဆည်းကာ မေတ္တာလည်းပွား၊ အာမိသအားနဲ့လည်း လှူဒါန်းပေးမယ်ဆိုရင် တာဝန်အကျေဆုံး ကျေးဇူးဆပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်။
မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်း (သို့) မရှိမကောင်း ရှိမှကောင်း…
။ အချိန် 5/06/2011 01:08:00 PM
စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ၊ ရာထူးဌာနန္တရတွေ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဟာ လူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိထားရင်ကောင်းသလို အသုံးလည်းတည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ ဒီအရာတွေကြောင့်ပဲ လူတွေမှာ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဒုက္ခတွေ ထပ်တိုးနေတာတွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာ ရှိထားရင် ဘဝမှာ နေရထိုင်ရာတာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတတ်ပေမယ့် ရှိလာရင်လည်း ရှိတဲ့အလျောက် ပူရပင်ရ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေရတတ်ပြန်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာများ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကလည်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဆန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဒီအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ လိုအပ်လာတဲ့အပြင် ရှိထားရင်လည်း ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီရှိလာတာတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မရှိတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လက်ခံလာကြတာတွေလည်း အများကြီး ရှိနေပြန်ပါတယ်။ မရှိတာမကောင်းပေမယ့် ရှိရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလာသူတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း များလာနေပါတယ်။
တစ်ခါက သိပ်မရှိရာကနေ အရမ်းရှိလာတဲ့ ဒကာမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဟိုစပ်ဒီစပ် စကားပြောရင်း ဘုန်းဘုန်းက ဒကာမကြီးကို “ဒကာမကြီး အနေနဲ့ မရှိရာကနေ ရှိလာတော့ ဘာတွေထူးခြားသွားသလဲ၊ ဘာတွေရပြီး ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားသလဲ” စသဖြင့် မေးကြည့်တော့ ဒကာမကြီးက “ကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်၊ မကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်ဘုရား၊ ကောင်းတာက ရှိလာတဲ့အတွက် တပည့်တော် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ၊ တပည့်တော် လုပ်ချင်တဲ့ အလှူတွေ လုပ်ခွင့်ရတယ်၊ လူ့ဘဝမှာ သက်သောင့်သက်သာ နေရတယ်ဘုရား၊ မကောင်းတာကတော့ တပည့်တော်မှာ ဒီရှိလာတဲ့အရာတွေ အပေါ်မှာ ပျောက်ပျက်သွားမှာ၊ ကုန်ဆုံးသွားမှာ ပိုပြီးစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လာတာပဲ ဘုရား၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးသိသိသာသာ ဖြစ်လာတာက တပည့်တော် အရင်ကထက် လိုချင်တဲ့လောဘတွေ များလာတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရင်ကဆို အတိုင်းအတာ တစ်ခုလောက် ရလာရင်ကိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်ပေမယ့် အခုတော့ နည်းနည်းလေးဆိုရင် ရတယ်လို့ကို မထင်တော့ဘဲ အချီကြီးတွေမှပဲ လိုချင်နေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား၊ ခပ်ကြွားကြွားလေး ပြောရရင်တော့ လောဘအသေးစားလေးတွေကို ပယ်လာတဲ့ သဘောများလားလို့တောင် ထင်မိပါတယ်၊ အမှန်တော့ လောဘအသေးစားကို ပယ်တာမဟုတ်ဘဲ နည်းရင်မလိုချင်တဲ့ လောဘအကြီးစားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်နေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဆိုးဆုံးက တပည့်တော် ရရှိလာတဲ့ အရာတွေအပေါ်မှာ သံယောဇဉ်တရားတွေနဲ့ ဘယ်တော့ပျက်ပျက်သွားမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ အမြဲတမ်း ကြောင့်ကျပူပန် နေရတာပါပဲဘုရား၊ တပည့်တော် အခုတဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်လာတာက စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ရာထူးဌာနန္တရတွေဟာ မရှိတာထက်၊ ရှိတာကပိုပြီး ပူပန်ကြောင့်ကျ စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား” စသဖြင့် လျှောက်ထားသွားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒကာမကြီး ပြောသွားသလိုပါပဲ။ လူတွေရဲ့ လောဘဆိုတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း ရှိပြီးရင်းရှိချင်၊ ရပြီးရင်း ရချင်နေတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းချမ်းသာနေတဲ့ သူတွေကို သွားမေးကြည့် နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီး ချမ်းသာချင်သေးလား၊ ဒီထက်ပိုပြီး ရချင်ရှိချင်သေးလားဆိုရင် ချမ်းသာချင်တယ်၊ ရချင်ရှိချင်တယ်လို့ပဲဖြေမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို ရလာတော့လည်း ကျေနပ်သွားလား၊ စိတ်ချမ်းသာသွားလားဆိုတော့ မကျေနပ်ပြန်၊ စိတ်မချမ်းသာပြန်ဘူး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မကျေနပ်တာက လိုချင်မှုတွေက ရပ်မသွားလို့ပဲဖြစ်ပြီး ရလာတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်မချမ်းသာတာကတော့ ရှိလာတာနဲ့အမျှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေက ပိုများလာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှိတော့လည်း ရှိချင်၊ ရှိလာပြန်တော့လည်း ထပ်ရှိချင်၊ ထပ်ရှိလာတာနဲ့အမျှ ထပ်ပူပင်တာတွေပဲ အဖြစ်များနေတဲ့အတွက် သေချာတွေးကြည့်တော့ ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာ အဖြာဖြာတွေဟာ မရှိရင်လည်းမကောင်း၊ ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ပုထုဇဉ်သဘာဝ လိုချင်ရချင် ရှိချင်နေတာတွေကတော့ ရှိနေကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တပ်မက်မှု လောဘဆိုတာက ရဟန္တာဖြစ်မှပဲ အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုချင်တပ်မက်မှုကို ကိုယ်ကအတိုင်းအတိုင် တစ်ခုနဲ့ ကန့်သတ်ထားနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောဘကို အကန့်လေးနဲ့ ထားပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ရပြီးရင်းရချင်၊ ရှိပြီးရင် ရှိချင်ရာက အဲဒီလောဘရဲ့ သားကောင်ဖြစ်လာပြီး ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ မတရားလိုချင်တဲ့ ဝိသမလောဘတွေအထိ ဖြစ်လာကာ ဒီဝိသမလောဘက ကိုယ့်ကိုဒီဘဝမှာကော သံသရာမှာပါ ဒုက္ခဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတရားလိုချင်တဲ့ ဝိသမလောဘ ဦးစီးလာရင် အမှားအမှန်ကိုလည်း မခွဲခြားတတ်တော့တဲ့အပြင် ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့လည်း လွဲလာတတ်ကာ ရရှိလာတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းမရှိ၊ ရရှိလာတာတွေ အပေါ်မှာလည်း စိုးရိမ်ပူပန် ကြောင့်ကျမှုတွေအထိ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လူဟာ လူစိတ်ပျောက်ကာ လူ့ကျင့်ဝတ်ပါ မရှိဘဲ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို မဖြစ်ဖို့ လိုချင်တပ်မက်မှု လောဘကို အကန့်တစ်ခုနဲ့ ထိန်းကြဖို့ သတိပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား လောကမှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရာထူးဌာနန္တရတွေဆိုတာ မရှိလည်းမကောင်း၊ ရှိလည်းမကောင်းတဲ့ အရာတွေဆိုတာ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် လောကမှာ မရှိရင်မကောင်း ရှိမှကိုကောင်းတဲ့ အရာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ မရှိရင်မဖြစ် ရှိမှကို ဖြစ်ရမှာဖြစ်သလို ရှိလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းကျိုးတွေကို ပိုမိုဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကလည်း ရှိနေတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကတော့ ကုသိုလ်တရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ကိုယ်ကျင့်သီလပေါ့။ ကိုယ်ကျင့်သီလဟာ သတ္တဝါတွေအတွက် မရှိရင် ကောင်းကိုမကောင်းတဲ့ အရာပဲဖြစ်ပြီး ရှိထားရင်တော့ ရှိထားသလောက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလမရှိရင် ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း ကောင်းမှာမဟုတ်သလို သံသရာမှာလည်း ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သီလရှိထားလို့ကတော့ ဒီဘဝနောင်ဘဝမှ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်အထိကို ကောင်းနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လောကမှာ မရှိရင် မကောင်း၊ ရှိမှကို ကောင်းတဲ့အရာဟာ ကုသိုလ်တရား၊ အထူးသဖြင့် သီလတရားပဲလို့ ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ သီလတရားဟာ ရှိထားရင်အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရတာလဲဆိုတော့ သီလရှိနေတဲ့သူတွေဟာ ဖြစ်ရာဘဝတိုင်းမှာ အရာရာ ကောင်းနေကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလရှိထားရင် ရှိထားတာနဲ့အမျှ ဒီဘဝမှာလည်း ကောင်းနေမှာဖြစ်ပြီး နောင်ဘဝ သံသရာမှသည် နိဗ္ဗာန်အထိအောင် ကောင်းနေကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေ အဖွင့်တွေအရ သီလရှိထားတဲ့သူတွေဟာ
၁။ ကောင်းသတင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေရခြင်း
၂။ မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ ယုတ်လျော့ပျက်စီးမှု မရှိခြင်း
၃။ ဘယ်လိုပရိတ်သတ်ထဲမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝင်ရောက်နေထိုင် သွားလာနိုင်ခြင်း
၄။ သေခါနီးကာလမှာ တွေဝေငြီးငြူခြင်းမရှိဘဲ သေရခြင်း
၅။ သေပြီးနောက်မှာလည်း အပါယ်လေးပါးမှလွတ်ကာ သုဂတိဘုံဝမှာ ဖြစ်ရခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုးတရား ငါးမျိုးကို ခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်း နားလည်မှတ်သား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကျင့်သီလဟာ မရှိရင် မကောင်းဘဲ ရှိထားရင်၊ စောင့်ထိန်းထားရင်တော့ ရှိထားသမျှ၊ စောင့်ထိန်းထားသမျှ ကောင်းနေမှာပဲလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လောကလူသားများ တောင့်တလေ့ရှိ၊ လိုချင်တပ်မက်မှု ရှိလေ့ရှိကြတဲ့ ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအနေဖြင့် ရှိထားရင် ကောင်းပေမယ့် အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်တဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ရှိတာထက်၊ မရှိတာကမှ ပိုကောင်းနေတဲ့ သဘောရှိတတ်ပြီး မရှိလို့ပူရတာထက် ရှိလို့ပူရတာက ပိုပြီးပင်ပန်းမှုကို ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဒီအရာတွေဟာ မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်းတဲ့ အရာတွေပဲလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်တရား၊ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ တရားတွေကတော့ မရှိရင်မကောင်း၊ ရှိထားမှကို ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်နေပြီး အထူးသဖြင့် သီလတရားကတော့ မရှိမဖြစ် ရှိကိုရှိရမယ့်၊ ရှိထားရင် ရှိထားတာနဲ့အမျှ အကောင်းတွေကို ဖြစ်စေမယ့် အစစ်အမှန် သဘာဝဓမ္မပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရထူးဌာနန္တရတွေဟာ ရှိထားရင် ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် အဲဒီအရာတွေ အပေါ်မှာ သတိမကပ်နိုင်ရင် ရှိထားတာနဲ့အမျှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ ပူပန်သောကကို ဖြစ်စေပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်သီလစတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေကတော့ ရှိထားရင် ရှိထားသလောက် သောကကင်းစေ၊ စိုရိမ်ပူပန်မှုကင်းစေ၊ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါခိုင်မြဲမှုကို ဖြစ်စေ၊ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ဘဝအဖြာဖြာမှာ ကောင်းတာတွေပဲ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရထူးဌာနန္တရတွေ ရှိပြီးရင်ရှိအောင် ကြိုးစားကြတာထက်စာရင် သီလစတဲ့ ကုသိုလ်တရားများ တိုးပွားသထက် တိုးပွားအောင် ကြိုးစားတာက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိစေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လောကလူသားများ အနေနဲ့ လောကမှာ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းဖြစ်တဲ့ ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်ရင်း ရှိလာတာနဲ့အမျှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုကို ဖြစ်စေ၊ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ မကောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေကြတာထက်စာရင် ရှိထားရင် ရှိထားတာနဲ့အမျှ ဘဝတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရား၊ ကုသိုလ်တရားများနောက်ကို လိုက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကို အဆင့်အမြင့်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးကို ဖြစ်စေကြတာက တဒင်္ဂခဏမှသည် နိဗ္ဗာန်အထိ ကြည့်တတ်တဲ့ အတိုမပြု အရှည်ရှုတဲ့ သဘောဖြစ်တဲ့အတွက် မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သူအဖြစ်မှ မရှိရင်မကောင်း ရှိမှကိုကောင်းစေတဲ့ သူအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် ကုသိုလ်တရားများကိုသာ ရသမျှ ကြိုးစားကြပါလို့ စေတနာထား မေတ္တာအားဖြင့် အလေးဂရု တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတယ်။
အားလုံး မရှိမကောင်း ရှိမှကောင်းတဲ့ အရာများနဲ့ ပြည့်နေသူများ ဖြစ်ကြပါစေ။
။ အချိန် 5/04/2011 05:20:00 PM
“မကောင်းသဖြင့် မိုးထားအပ်သည့် အိမ်ကို မိုးရေသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သကဲ့သို့
ဘာဝနာဖြင့် ကောင်းစွာထုံလွှမ်းထားခြင်း မရှိသည့် စိတ်ကို ရာဂသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်၏”
တစ်ခါက ရန်ကုန်မှ တိုက်ကြီးသို့ တရားဟောကြွစဉ် လမ်းဘေးကျေးရွာများရှိ ဆောက်လက်စ၊ မိုးလက်စ အိမ်လေးများကိုကြည့်ကာ အတွေးပွားခဲ့ဖူး၏။ တရားဟောစဉ်မှာလည်း ထိုအတွေးစလေးများကို ထည့်သွင်းဟောကြား ပေးခဲ့ဖူး၏။ တွေးမိခဲ့သည့် အတွေးစလေးများမှာ အိမ်များအကြောင်းပင် ဖြစ်၏။ အိမ်အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် အချို့အိမ်များသည် ဆင်းရဲလွန်းလှသဖြင့် အမိုးပင် လုံခြုံကောင်းမွန်အောင် မတည်ဆောက်နိုင်သည့် အိမ်များရှိသကဲ့သို့ အချို့အိမ်များသည်ကား ကောင်းမွန်ပြည့်စုံ လုံခြုံအောင် တည်ဆောက်ထားသည့် အိမ်များဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထူးခြားချက်မှာ မလုံမခြုံတည်ဆောက်ထားသည့် အိမ်များသည် မိုးလေစသည့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို အလွယ်တကူ ခံရတတ်ပြီး လုံခြုံကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက်ထားသည့် အိမ်များသည်ကား ထိုဒဏ်များကို အကာအကွယ် ပြုထားနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။
ဘုရားဟော တရားတော်များတွင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အိမ်နှင့်တင်စား၍ ဖွင့်ဆိုဟောထားချက်များ အများအပြားရှိ၏။ အိမ်၏တည်ဆောက်မှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ တည်ဆောက်မှုကို ခိုင်းနှိုင်းထားချက်များလည်း ရှိ၏။ လူတို့နေရာ အိမ်၏လုံခြုံရေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ လုံခြုံရေးကို တင်စားထားချက်းများလည်း ရှိ၏။ ထိုဥပမာများအရ အိပ်၏လုံခြုံရေးတွင် အမိုးသည်လည်း အဓိကကျသည့် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သကဲ့သို့ ရုပ်နာမ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ခန္ဓာအိမ်တွင်လည်း စိတ်တည်းဟူသော အမိုးသည် အထူးအရေးပါလှသည်ကို သတိပြုမိကြမည် ဖြစ်၏။ အိမ်တွင်အမိုး မလုံသည့်အခါ မိုးရေမိုးပေါက်စသည်များ အလွယ်တကူ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာနိုင်သကဲ့သို့ ခန္ဓာအိမ်ကို မိုးကာပေးထားသည့် စိတ်အမိုး မလုံသည့် အခါတွင်လည်း ရာဂစသည့် ကိလေသာ မိုးရေပေါက်များ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ခံရမည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မိုးရေမိုးပေါက်များ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အိမ်ကိုကောင်းစွာ မိုးထားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ရာဂစသည့် ကိလေသာများ၏ ဝင်ရောက်နှိပ်စက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် စိတ်ကိုကောင်းစွာ မိုးကာထားရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ထိုစိတ်ကို ကိလေသာများမှ ကာကွယ်ထားရန်မှာလည်း သမထ၊ ဝိပဿနာ ဘာဝနာအလုပ်ဖြင့်သာ ကာကွယ်ထားရမှာ ဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ၏။
မှန်၏။ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏စိတ်သည် အချိန်ပြည့် အကုသိုလ်အလုပ်များ၊ မကောင်းသည့် အကြံအစည် အတွေးများတွင် ပျော်မွေ့နေတတ်သည့် သဘောရှိ၏။ အဆင်းအသံအနံ့ စသည့် အာရုံများ၏နောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်ကာ နှစ်သက်လျှင်လည်း နှစ်သက်သည့်အလျောက်၊ မနှစ်သက်လျှင်လည်း မနှစ်သက်သည့်အလျောက် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟစသည့် ကိလေသာ တရားများသာ အဖြစ်များနေတတ်ကြ၏။ စိတ်၏သဘောသည် သတိတရားဖြင့် ထိန်းချုပ်နေစဉ်ကိုပင် ကိလေသာများ၏ ခေါ်ဆောင်မှုနောက်သို့ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်နေတတ်သည့် သဘောရှိနေပြီး မထိန်းချုပ်ဘဲ သတိလက်လွတ်သာ ထားလိုက်မည်ဆိုပါက ပိုလို့သာ ဆိုးလာနိုင်သည့် သဘောရှိပေ၏။ ထို့ကြောင့် ပညာရှိများက စိတ်ကိုကိလေသာ တရားများ၏ နှိပ်စက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဘာဝနာအလုပ်ကို ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ၏။ စိတ်ကို ရာဂစသည့် ကိလေသာရန်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်မှာ သမထ၊ ဝိပဿနာ ဟုခေါ်သည့် တရားဘာဝနာ အားထုတ်ခြင်း အလုပ်မှတပါး အခြားမရှိသည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပါပေ၏။ သို့ဆိုစေကာမူ ဂုဏ်တော်ပွားရင်း၊ မေတ္တာပို့ရင်း၊ အာနာပါန စီးဖြန်းရင်းကိုပင် ကိလေသာတရားများ၏ နှိပ်စက်မှုက တစ်ခါတရံ ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိတတ်သေးသဖြင့် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စိတ်အစဉ်ကို သတိမလွတ်ဘဲ အချိန်ပြည့် ဘာဝနာအလုပ်ကို ကြိုးစားအားထုတ်နေကြရမည့် သဘောရှိ၏။
ကိလေသာ တရားသည် ပုထုဇဉ်မှန်သမျှကို အမြဲနှိပ်စက်နေတတ်သည့် သဘောရှိ၏။ ကိလေသာတရား ထူပြောလှသည့် ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည့် လူ့လောကတွင် ရှိနေကြသည့် လူသာမန်များ မဆိုထားလင့် ငြိမ်းအေးသည့် အသိုင်းအဝိုင်းဟုဆိုသည့် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတော်များသည်ပင် ကိလေသာတရားများ၏ နှိပ်စက်မှုကြောင့် တရားအလုပ် အားမထုတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်လေ့ရှိတတ်၏။ ထိုအချက်ကို ဘုရားရှင်၏ ညီတော်ဖြစ်သည့် နန္ဒရဟန်းက သက်သေပြလျက်ရှိ၏။ ညီတော်မင်းနန်ခေါ် နန္ဒမင်းသားသည် မင်္ဂလာဆောင်မည့် နေ့မှာပင် ဘုရားရှင်၏ ခေါ်ဆောင်သွားမှုဖြင့် ဘုရားနောက်တော်ပါးမှ ကျောင်းတော်အထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရပြီး အစ်ကိုတော်ဘုရား၏ တောင်းဆိုချက်ဖြင့် မငြင်းသာ မဆန်သာ ရဟန်းဘဝကို ရောက်ရှိလာခဲ့ရသည့် ရဟန်းတော် တစ်ပါးဖြစ်၏။ သာသနာ့ဘောင်တွင် ရဟန်းဝတ်နေခဲ့ရသည့် အရှင်နန္ဒသည် အစ်ကိုတော်ဘုရားကို ကြောက်ချစ်ရိုသေသဖြင့်သာ ရဟန်းဝတ်နေခဲ့ရသော်လည်း ရဟန်းတရား အားထုတ်မှုတွင်ကား စိတ်ဝင်းစားမှု မရှိလှပေ၏။ ထိုအရှင်၏ စိတ်ထဲတွင် အမြဲမပြတ် စွဲကျန်ထပ်နေသည်ကား ဘုရားနောက်ပါးမှ ကျောင်းတော်သို့အသွား အမှာတော်ပါးလိုက်သည့် နှမတော် ဇနပဒကလျာဏီ၏ “အရှင့်သား အမြန်ပြန်ခဲ့နော်” ဟူသည့် စကားတော်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ နန္ဒရဟန်း၏စိတ်ကို ကိလေသာ စကား၊ ကိလေသာ အသံများက အမြဲနှိပ်စက်နေသဖြင့် တရားအားထုတ်နေသော်လည်း အရှင်နန္ဒ တရားမရနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပေ၏။
ညီတော်နန္ဒ၏ အဖြစ်ကို သိရှိတော်မူနေသည့် ရှင်တော်ဘုရားသည် တစ်နေ့တွင် နန္ဒရဟန်းကိုခေါ်ကာ တန်ခိုးတော်ဖြင့် နတ်ပြန်သို့ ကြွတော်မူလေ၏။ နတ်ပြည်နတ်နန်းသို့ ကြွရာလမ်းခရီး၌ မီးလောင်ပြင် တောအုပ်တစ်ခုတွင် ထိုင်နေသည့် မျောက်အိုမတစ်ကောင်ကို တွေ့သဖြင့် ဘုရားရှင်က အရှင်နန္ဒအား “ဤမျောက်မနှင့် ဇနပဒကလျာဏီ မည်သူက အလှသာသနည်း” ဟု မေးတော်မူရာ နန္ဒမင်းသားမှာ “နှိုင်းမှနှိုင်းရက်ပေခြင်း” ဟု ယူကြုံးမရ ဖြစ်ခဲ့ရသေး၏။ တစ်ဖန်နတ်ပြည်သို့ ရောက်ပြန်သည့် အခါတွင်လည်း နတ်သမီးများကိုပြကာ ရှင်တော်ဘုရားက နန္ဒရဟန်းအား “ဤနတ်သမီးများနှင့် ဇနပဒ မည်သူက ပိုလှသနည်း” ဟု မေးတော်မူသည့် အခါတွင်ကား နန္ဒရဟန်းမှာ “နတ်သမီးများ၏ အလှနှင့်ယှဉ်လျင် သူ၏နှမ ဇနပဒမှာ လမ်းတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့် မျောက်အိုမနှင့်သာ တူပေတော့သည်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့လေ၏။ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားရှင်က အရှင်နန္ဒအား နတ်သမီးများဖြင့် မက်လုံးပေးကာ တရားအလုပ်ကို ကြိုးစားအားထုတ်စေသဖြင့် အရှင်နန္ဒ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားခဲ့လေတော့၏။
ဘုရားကျောင်းတော်တွင် ညီတော်ရဟန်း၏ အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာတော်များ၏ စကားဝိုင်းမှာ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေခဲ့၏။ အရှင်နန္ဒ၏စိတ်တွင် ဇနပဒကလျာဏီ မှာကြားလိုက်သည့် စကားကိုသာ ကြားယောင်နေပြီး တရားအားမထုတ်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရဟန်းတော်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ၏။ ထို့အပြင် ယင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရဟန်းတော်များက ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထားကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က “မကောင်းသဖြင့် မိုးထားအပ်သည့် အိမ်ကို မိုးရေသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သကဲ့သို့ ဘာဝနာဖြင့် ကောင်းစွာထုံလွှမ်းထားခြင်း မရှိသည့် စိတ်ကို ရာဂသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်၏” (ဓမ္မပဒ၊ ယမကဝဂ်၊ နန္ဒမထေရ်ဝတ္ထု) စသည့် အထက်ပါ တရားစကားကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ဤဒေသနာတော်အရ စိတ်၏ဆန်းကြယ်မှုကို ကောင်းစွာတွေ့ကြရမည် ဖြစ်ပါ၏။ စိတ်ကိုကောင်းစွာ မထိန်းသိမ်းနိုင်သဖြင့် ကိလေသာ အပူမီး လောင်မြိုက်ကြရသည့် အဖြစ်ကို သတိပြုမိကြမည် ဖြစ်ပါ၏။ စိတ်၏တွေးတော ကြံစည်မှု မနောကံ၏ အရေးပါမှုကို အလေးဂရု ပြုမိကြမည် ဖြစ်၏။ အမှန်အားဖြင့် စိတ်သာမဟုတ် ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည့် ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ စသည့် အမူအရာများသည် အားလုံးအရေးပါသည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ မနောကံသည် အရေးပါသည်ဟုဆိုသော်လည်း စင်စစ် အမူအရာတိုင်းသည် အားလုံးအရေးပါသည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သုံးမျိုးလုံးတွင် သတိမယှဉ်နိုင်ပါက အကုသိုလ် ကိလေသာ ဖြစ်ဖွယ်များ ရှိနေတတ်သဖြင့် ထိုအမူအရာများကို အထူးထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန်လည်း လိုအပ်လှ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက မိမိတို့ ပြုလုပ်ကြသည့် အမူအရာတိုင်းတွင် အကုသိုလ် ကိလေသာများ အဖြစ်များနေကြမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓစာပေများတွင် ထိုကိုယ်နှုတ်စိတ် အမူအရာများကို သီလ၊ သမာဓိ၊ အကျင့်တရားများဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုရှင်းပြကြ၏။ ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကိုယ်ကျင့်သီလကို အထူးပြု စောင့်ထိန်းကြရမှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ စိတ်အမူအရာ အတွေးအကြံများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ဘာဝနာအကျင့်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါ၏။ သီလစောင့်ထိန်းခြင်းသည် ကိုယ်နှင့်နှုတ်ကို အကုသိုလ်၊ အဖြစ်နည်းစေရန်၊ ဒုစရိုက်အမှု မကျူးလွန်မိစေရန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားဘာဝနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းသည် စိတ်အမူအရာ မနောကံကို ကိလေသာအတွေးများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နှိပ်စက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် စိတ်သည် အလွန်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် ခက်လှသဖြင့် ထိုစိတ်ကို ကိလေသာရန်များ၏ တိုက်ခိုက်နှိပ်စက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဘာဝနာအလုပ်ကို အားထုတ်စေခြင်း ဖြစ်၏။
သေချာတွေးကြည့်လျှင် စိတ်၏ အကုသိုလ် ကိလေသာများတွင် အဖြစ်များနေသည့် သဘောကို မိမိတို့ နေထိုင်ကျင်လည်နေသည့် ဘဝများတွင် အချိန်မရွေး တွေ့နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါ၏။ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေလျှင်လည်း တစ်ယောက်တည်း ရှိနေသည့်အလျောက်၊ အများနှင့် ရှိနေလျှင်လည်း အများနှင့် ရှိနေသည့်အလျောက်၊ အာရုံတစ်ခုခုနောက်ကို စိတ်က လိုက်မိနေလျှင်လည်း လိုက်မိနေသည့်အလျောက် စသဖြင့် အကုသိုလ်များ ကိလေသာ တရားများက အချိန်မရွေး ဖြစ်နေတတ်သည့် သဘောရှိနေသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပေ၏။ ထိုသို့ အလွယ်တကူ ဖြစ်တတ်သည် အကုသိုလ် ကိလေသာတရားများ အလွယ်တကူ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဂုဏ်တော်ပွားခြင်း၊ မေတ္တာပွားခြင်း၊ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း စသည့် သမထအကျင့်၊ ရုပ်နာမ်တို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို အရှိအတိုင်း သိမှတ်ပေးခြင်း ဝိပဿနာအကျင့် တို့ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ကာ စိတ်အစဉ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပေးရခြင်း ဖြစ်၏။ သို့ပါလျက် တစ်ခါတရံ ဘုရားရှိခိုးရင်း၊ တရားမှတ်ရင်း၊ ဂုဏ်တော်ပွားရင်းဖြင့်ပင် အကုသိုလ်တရား၊ ကိလေသာ တရားများက ဖြစ်တတ်ကြပေသေး၏။ မည်သို့ဆိုစေ မလုပ်သည်နှင့်စာလျှင် လုပ်နေခြင်းက ကိလေသာရန်များကို ကာကွယ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကျင့်နိုင်သမျှ ကျင့်ကြံနေကြရမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ သမထအကျင့်၊ ဝိပဿနာ အကျင့်များဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားခြင်းမရှိသည့် စိတ်သည် ရာဂစသည့် ကိလေသာတရားများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နှိပ်စက်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ခံရတတ်သည့် သဘောရှိသဖြင့် မိမိတို့၏ စိတ်ကို ဘာဝနာအကျင့် တစ်ခုခုဖြင့် အမြဲမပြတ် ထုံလွှမ်းကာကွယ် ထားသင့်ကြောင်း ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။ မကောင်းသဖြင့် မိုးထားအပ်သည့် အိမ်ကို မိုးရေးပေါက်သည် အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ထိုးဖောက်နိုင်သကဲ့သို့ ဘာဝနာအကျင့် တစ်ခုခုဖြင့် ထုံးလွှမ်းထားခြင်း မရှိသည့် စိတ်ကို ရာဂတရားသည် အလွယ်တကူ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နှိပ်စက်တတ်သည့် သဘောကို သတိပြု ဆင်ခြင်ကာ ထိုသို့ မဖြစ်စေရန် မိမိတို့၏ စိတ်ကို တရားအလုပ် ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ကိလေသာရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း သိစေလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် ကိလေသာ တရားဟူသည် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အရွယ်မရွေး ဝင်ရောက်နှိပ်စက်တတ်သည့် သဘောရှိသဖြင့် သတိမပြုမိပါက အမူအရာတိုင်းတွင် အကုသိုလ် ဖြစ်တတ်သည့် သဘောရှိသည်ကို သတိပြုဆင်ခြင်ကာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် မိမိတို့၏ စိတ်ကို ရာဂစသည့် ကိလေသာတရားများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နှိပ်စက်မှုများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သမထဘာဝနာ၊ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ တစ်ခုခုကို အမြဲမပြတ်ပွားထုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါဟု တိုက်တွန်းရင်း ခန္ဓာအိမ် လုံခြုံရေးအတွက် စိတ်အမိုးကို ကောင်းအောင်မိုးကြဖို့ ဘုရားတရား အငှါးပွား၍ အသိပေးစကား ပါးလိုက်ရပါသည်။